Wararkii u dambeeyay Caalamka ee cudurka Coronovirus - Jowhar Somali news Leader
Home News Wararkii u dambeeyay Caalamka ee cudurka Coronovirus
Wararkii u dambeeyay Caalamka ee cudurka Coronovirus
Maanta oo kaliya ayaa dalka Taliyaaniga waxaa ugu geeriyooday cudurka Coronovirus dad gaaraya 368 ruux iyadoo tirada guud ee cudurkan ugu geeriyootay Talyaaniga ay gaareen 1,809,waxaana haatan u xanuunsanaya dad gaaraya 24,747 ruux.
Dalka Spain ayaa noqday wadanka Labaad ee qaarada Yurub ee soo roga bandow is xirid ah, kadib markii labo kun oo xaalado cudurkan sii faafaya ah laga helay dalkaas,ayna laba laabmeen dadka u dhimanaya.
Dalka Iran ayaa la sheegay in dad kabadan kun ruux ay ugu dhinteen cudurkan 24kii saacadood ee ugu dambeeyay waxaana dad ka uu soo ritey cudurku ay gaareen 14,000 oo ruux.
Magaalo madaxda dalka Filibiin ee Manila ayaa la go’odoomiyay iyadoo dadka ku nool oo gaaraya 12 malyan loo sheegay inaysan safri Karin muddo bil ah,dhammaan xarumihii waxbarashada waa la xirey waxaana la mamnuucay in la qabto xaflado.
Maraykanka oo kordhiyay baaritaanada lagau sameynayo dadka ka soo laabanayo Yurub ayaa sababay buuq badan garoomada diyaaradaha.
Dowlada Qadar ayaa sheegtay inay mamnuuceyso dhammaan dadka aan u dhalan dalkaas inay soo galaan Qadar muddo labo toddobaad ah laga bilaabo Arbacada soo socota. Guud ahaan dalka Qadar ayaa laga diiwaangeliyay dad gaaraya 401 inay qabaan cudurkan.
Lixda dal ee la isku yiraahdo wadamada Khaliijka ayaan lagu arag isa salaamid wanaagsan,jameeco lagu tukado masaajidyada.Waxaa haawanaya wadooyinka, goobaha ganacsiga waxana cudurkan uu jahada ka lumiyay dadkii dalalkaas ku noolaa.
Inkabadan 870 xaaladood oo ah cudurkan COVID-19 ayaa laga diiwaangeliyay lixdan dal balse illaa hadda wax u dhintey lama sheegin cudurkan.
Tirada dadka ugu dhintey cudurkan Coronaha dalka Britain ayaa gaartay 35 ruux iyadoo 14 ruux ay 24kii saacadood ee ugu dambeysay ay u geeriyoodeen.
Dalka Morocco ayaa dadka uu cudurkan soo ritey ay gaartay 28 ruux waxaana u geeriyooday hal ruux iyadoo qof kalana uu ka bogsaday cudurkan.
Dowladaha caalamka ayaa sare u qaaday dadaalada ay kula tacaalayaan sidii loo xakamayn lhaa cudurkan.
Illaa hadda waxaa la ogyahay in tirade dadka uu cudurkani soo ritey ay gaareyso 153,000 halka ay u dhinteen 5,800 oo ruux.